seom_user, Author at OSC Hospital
OSC ဆေးရုံမှ ရန်ကုန်မြို့ Stay At Home ကာလတွင် လှူဒါန်းခဲ့ပါသော မွန်မြတ်သော ကုသိုလ်အလှူအား နတ်၊ လူ သာဓု ခေါ်စေသော် COVID-19 ရောဂါ ပြန့်ပွါးမှုအား ထိမ်းချုပ်နိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်အသီးသီးတွင် နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများ Stay At Home နေထိုင်ကြရန် နှင့် မလိုအပ်ပဲ နေအိမ်ပြင်ပသို့ မထွက်ကြရန်ကို 2020ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၄)ရက်မှ အောက်တိုဘာ (၇)ရက်နေ့ထိ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ထိုသို့သတ်မှတ်ထားသော Stay At Home (၁၄)ရက်တာ ကာလအတွင်းမှာ ပြင်ပသို့ သွားရောက်ပြီး ဆွမ်းအလှူခံထွက်ရန် အခက်အခဲရှိကြပါသော သံဃာတော်များနှင့် သီလရှင်…
OSC ဆေးရုံမှ ယနေ့ တွင်လှူဒါန်းခဲ့သော မွန်မြတ်သော အလှူ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (င)ရပ်ကွက် သန္တာလမ်းအတွင်းတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ စီစဉ်ထားရှိမည့် ပြည်သူများရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် Quarantine Center တွင် လိုအပ်သောအစားအသောက်အသုံးအဆောင်နှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများဝယ်ယူမှုကို လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် OSC ဆေးရုံမှ ငွေကျပ် (၅)သိန်းအား ဆေးရုံ၏တာဝန်ရှိသူများမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထံသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။#OSC_Hospital#OSC_COVID_19_CSR latest posts
“COVID-19 ကာကွယ်ရေး၊ ကူညီထောက်ပံ့ ဒို့အားပေး။” ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားတွင် ကူးစက်ပြန့်ပွါးမှုမြန်ဆန် သော COVID-19 ရောဂါ၏ဂရက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာမက နိုင်ငံတကာမှာလည်း စီးပွါးရေး ထိခိုက်ကျဆင်းမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။ယခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေများ မညီမျှပဲ ထိခိုက်မှုများစွာ ရှိနေကြရပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပွါးနေမှုများကို လျစ်လျူမရှုဘဲ အများပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် OSC ဆေးရုံမှသယ်ပိုးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ထိုသို့သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ရာတွင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှစီစဥ်ထားရှိသော မြောက်ဥက္ကလာ ၊မယ်လမု ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်၀န်း အတွင်းရှိ Community Based Facility Quarantine Centerတွင် ပြည်သူများအသုံးပြုရန် အတွက် ကျန်းမာရေးတွင် လိုအပ်သော အစားအသောက်၊အသုံးအဆောင်နှင့် အထောက်အကူပစ္စည်းများ၀ယ်ယူမှုကို လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် OSC ဆေးရုံမှ ငွေကျပ်…
Valentine’s Day Promotion ဖေဖော်ဝါရီလ 14 ရက်နေ့ဟာ ဆိုရင် မိမိ ချစ်ခင်ရသူတွေကို မေတ္တာဖော်ညွှန်းဖို့အကောင်းဆုံး အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။Happy Valentine Day ဟာ ချစ်သူရည်းစားများ ၊ လူငယ်များသာ ကျင်းပလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး ။ လူကြီးလူငယ်မရွေး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ဂရုစိုက်ကြောင်း ချစ်ခြင်းတွေကိုပြသဖို့ အခွင့်အရေးရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ဒါကြောင့် ကိုယ်ချစ်ရသော မိသားစုဝင်များ နှင့် အချစ်ရဆုံးမိသားစုဝင်များ အတွက် များပြားလှတဲ့လက်ဆောင်တွေအစား OSC ဆေးရုံကြီး ၏ ကျန်းမာရေးလက်ဆောင်မွန်လေး ပေးလိုက်ကြရအောင်… (Feb 14) မှ (Feb 27) အတွင်း OSC ဆေးရုံမှာ Medical Checkup ပြုလုပ်သူတိုင်းကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း Cash Back…
OSC Hospital Zumba Activity
OSC Hospital Zumba Activity မင်္ဂလာပါ။OSC ဆေးရုံ မိုးရာသီအလွန် လစဉ်ကျင်းပလျှက်ရှိသော Zumba အက လှုပ်ရှားမှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လက်ကျင်းပပေးနေသည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။???????? မိုးရာသီကလွဲလို့ ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီ မှာ အားကစားတစ်မျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိသလောက်ကို နည်းပါးတဲ့ Zumba ကပွဲများကို OSC မှ ဆက်တိုက်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ လာရောက် ကပြသင်ကြားပေးသော Zumba Instructor (အကနည်းပြ) ဆရာများမှာလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင် နာမည်အကြီးဆုံးသော အကနည်းပြများဖြစ်သည့် “YooLi” နှင့် “Cor Cor” တို့ကိုယ်တိုင် သေချာသင်ကြား လမ်းညွှန်ပြသ သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်းနဲ့ရော မောနေပြီလား ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ အမောပြေဖို့အတွက် “Royal-D” အားဖြည့်အချိုရည်…
OSC Zumba Event
OSC Zumba Event မငျ်ဂလာပါ။ မိုးရာသီကုနျဆုံးလာပွီဆိုတော့ OSC ဆေးရုံကွီးရဲ့ Zumba Class တှကေလဲ ပွနျလညျအသကျဝငျလာပါပွီနောျ။ မိုးရာသီတဈခုလုံးမှာလညျး အနားယူပွီးသှားပွီဆိုတော့ ကနြျတဲ့လတှမှော OSC နဲ့အတူ အခြိနျတဈနာရီလောကျ ပေးပွီး ကယျလိုရီ ၁၀၀၀ လောကျလြှော့ခရြအောငျ။ ဒါ့အပွငျ ကနြျးမာခွငျးသညျ လာဘျတဈပါးဟုဆိုသည့ျအတိုငျး လနျးဆနျးတကျကွှသော နံနကျခငျးအခြိနျတှငျ ကိုယျလကျလှုပျရှားအားကစားပွုလုပျပေးခွငျးဖွင့ျ မိမိ၏တဈနေ့တာကို တကျကွှလနျးဆနျးစှာ နထေိုငျလိုကျပါ။ မွူးကွှတဲ့စညျးခကြျတှနေဲ့ LATIN DANCE အမြိုးအစားတဈမြိုးဖွဈတဲ့ ZUMBA အက ကို လှတျလပျပြောျရှှငျစှာ ကခုနျခွငျးဖွင့ျ (STRESS) စိတျဖိစီးမှုမြား လြှော့ခလြိုကျရအောငျ။ဒီတဈခေါကျ Zumba မှာလညျး စညျးကမျးခကြျလေးတှေ နဲနဲရှိပါသေးတယျနောျ။ZUMBA DANCE ပြောျရှှငျစှာကခုနျနိုငျရနျအတှကျ. OSC Facebook…
BNH Gynecological Clinic @ OSC Hospital
BNH Gynecological Clinic @ OSC Hospital အမျိုးသမီးများမှာ အဖြစ်များသော…..• သားအိမ်အလုံးတည်ခြင်း• သားဥအိမ်ရေအိတ်တည်ခြင်း• သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်း• အဖြူဆင်းခြင်း• မိန်းမကိုယ်ယားခြင်း• ဓမ္မတာမမှန်ခြင်း စတဲ့ မီးယပ်ပြဿနာအမျိုးမျိုး…….• ကလေးရရန်ခက်ခဲခြင်း ပြဿနာအမျိုးမျိုး…….• သားအိမ်ထဲသုတ်ပိုးထည့်ခြင်း(IUI) နှင့် ဖန်ပြွန်သန္ဓေနည်းလမ်းဖြင့်ကလေးရယူခြင်း (IVF) အကြောင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများကို …… ထိုင်းနိုင်ငံမှ မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်မကြီးနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ OSC ဆေးရုံတွင် လစဉ် ပြသဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီ။ ထိုင်းမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်မကြီး ဒေါက်တာဝိပဒါသည် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နှစ်ပေါင်း ၁၂၁နှစ် သက်တမ်းရှိပြီးဖြစ်သော BNHဆေးရုံကြီးမှ မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်မကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ✅လူနာတစ်ယောက်လျှင် မိနစ် ၂၀ မှ နာရီဝက်ခန့် အချိန်ပေးပြီး စမ်းသပ်ဆွေးနွေးပေးပါသည်။✅ဘာသာပြန်ပေးမယ့်မြန်မာဆရာဝန်လည်းရှိတာကြောင့် လူနာအနေနဲ့ မိမိပြောလိုသမျှ သိလိုသမျှကို သေသေချာချာမေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။…
BNH@OSC_Hospital (Health Talk)
BNH@OSC_Hospital (Health Talk) ရန်ကုန်မြို့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ BNHဆေးရုံမှ သားဖွားနှင့် မီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်မ ဒေါက်တာဝီဖဒါ၏ “မီးယပ်ရောဂါကုသပုံ နှင့် ဖန်ပြွန်သန္ဓေနည်းဖြင့် ကလေးရယူခြင်း” ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း – 01 – 656172 -176 / 09-95818-8506/ 09-7850-10105 (YGN) latest posts
Test ရန်ကုန်မြို့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ BNHဆေးရုံမှ သားဖွားနှင့် မီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်မ ဒေါက်တာဝီဖဒါ၏ “မီးယပ်ရောဂါကုသပုံ နှင့် ဖန်ပြွန်သန္ဓေနည်းဖြင့် ကလေးရယူခြင်း” ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။ လူဦးရေ အကန့်အသတ်ရှိပါသဖြင့် ပွဲတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ကျွန်မတို့ OSC ဆေးရုံ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း – 01 – 656172 -176 / 09-95818-8506/ 09-7850-10105 (YGN) latest posts
In: News Letter
OSC Hospital News Letter Volume 14 Health knowledge article of OSC hospital. latest posts
Copyright @ 2020 OSC Hospital.